People – Page2– Gentleman Magazine
စိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်နေသူတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲ ???
စိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်နေသူတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲ ??? (Zawgyi) သင့်ဖက်က စိတ်မဆိုးပေမယ့် တစ်စုံတစ်ယောက်က အကြီးအကျယ်စိတ်ဆိုး ဒေါသဖြစ်နေတာကို ကြုံဖူးပါသလား။ ဒီလို စိတ်ဆိုးနေတဲ့သူဟာ သင့်ကောင်မလေး၊ သူငယ်ချင်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဒါမှမဟုတ် အခြားသူစိမ်းတစ်ယောက်ယောက်လည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေက သင့်ကို နေမထိထိုင်မသာဖြစ်စေမှာပါ။ ဒါဆိုရင် သင့်ကို စိတ်ဆိုးနေတဲ့သူကို ဒေါသပြေပျောက်ပြီး
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး တိုးတက်စေနိုင်မည့် နည်းလမ်း (၁၀) (Zawgyi) သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို တိုးတက်လာအောင် ပြုပြင်ယူလို့ ရပါတယ်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဆိုတာကတော့ လူတစ်ယောက်ကို အခြားသူတွေနဲ့ ကွဲပြားခြားနားသွားစေတဲ့ စဉ်းစားပုံ၊ ခံစားပုံနဲ့ အပြုအမူတွေကို ခြုံပြောတဲ့ စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကောင်းတယ်လို့ ပြောတာဟာ လူတစ်ယောက်ဟာ နှစ်လိုဖွယ်ရာဖြစ်တယ်၊ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ် သူနဲ့
ဘ၀မှာ လိုအပ်တဲ့ လူ(၃)မျိုး (Zawgyi) သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပြောဆိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေရသူတွေက သင့်ဘ၀နဲ့ အောင်မြင်မှုအပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ တည်ငြိမ်တဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ အထောက်အကူပြုနိုင်သူတွေ ရှိနေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီဆက်ဆံရေးတွေမှာ ဟန်ချက်ညီမျှမှု မရှိပဲ မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ အလားအလားတွေကို ရပ်တန့်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ဘ၀မှာ အမှန်တကယ်လိုအပ်တာ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲ ဆိုတာကို
ဘ၀ခရီး အဆင်ပြေဖို့အတွက် သိထားရမည့်အချက်များ
23/06/2017 23/06/2017 escapetravelmagazine
[sg_popup id=”6″ event=”onload”][/sg_popup]ဘ၀ခရီး အဆင်ပြေဖို့အတွက် သိထားရမည့်အချက်များ [showhide type=”links” more_text=“>>>Unicode<<<“ less_text=”Hide Unicode “] ဘဝခရီး အဆငျပွဖေို့အတှကျ သိထားရမညျ့အခကျြမြား ၁။ ဘယျသူ့ကိုဖွဈဖွဈ ဘာအကွောငျးကိုမှ ဖွဈကွောငျးကုနျစငျ မပွောပွပါနဲ့။ သငျ့ရဲ့အခကျအခဲ၊ အစီအစဉျ၊ ပိုငျဆိုငျတဲ့အရာ စတဲ့ ဘယျအရာကိုပဲဖွဈဖွဈ ဘယျသူ့ကိုမှ အသေးစိတျမပွောပွပါနဲ့။
အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် ၅ ခု ကျွန်တော်က အသက် ၁၇ ပါ။ ကျွန်တော့် အထက်တန်းကျောင်း ပညာရေး အကြံပေးရှေ့မှာ ထိုင်နေပါတယ်။ သူက ကျွန်တော့်ဘဝနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ဘယ်လို ဆက်လုပ်ချင်လဲ မေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော် ဘာမှ မသိပါဘူး။ “မင်းဘာကို စိတ်ထဲက
သမိုင်းတလျှောက် အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုဟ် (၁၀)ဦး သမိုငျးတလြှောကျ အခမျြးသာဆုံးပုဂ်ဂိုဟျ (၁၀)ဦး ယနေ့ခေတ် ကမ္ဘာမှာအချမ်းသာဆုံးလို့ ပြောလိုက်ရင် Bill Gates နဲ့ Warren Buffets တို့ကိုပဲ ပြေးမြင်မိမှာပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိအချိန်မှာ သူတို့ထက် ချမ်းသာတဲ့သူ မရှိဘူးဆိုပေမယ့် အတိတ်သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကို ပြန်ကြည့်ပြီး နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် သူတို့က
ခေါင်းဆောင်ကောင်းများမှာတွေ့ရသည့် အရည်အချင်းများ ခေါငျးဆောငျကောငျးမြားမှာတှရေ့သညျ့ အရညျအခငျြးမြား အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တိုင်း အောင်မြင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ စစ်မှန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဟာ တခြားသူတွေကိုဦးဆောင်နိုင်သလို သူတို့တွေရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေ ရောက်ရှိဖို့ကူညီပေးရာမှာလည်း စိတ်အားထက်သန်ကြပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်စင်စစ်တွေဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ တိုးတက်နေဖို့အမြဲကြိုစားနေတတ်ပြီး သူတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ရှေ့ဆောင်လမ်းပြအဖြစ်နဲ့လည်း ရပ်တည် နိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံတွေများစွာရှိပေမယ့် အခုဖော်ပြမယ့်အချက်(၇)ခုကတော့ ခေါင်းဆောင် အစစ်တွေမှာ သာတူညီမျှတွေ့ရတဲ့ အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဖောကျထှကျတီထှငျဖနျတီးမှုအတှကျ ရှေးရိုးစှဲနညျးလမျး ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပြောပြပါမယ်။ Albert Einstein ဟာ ပုံမှန်ကျောင်းကို ဆန့်ကျင့်ခဲ့ပြီး အတန်းထဲမှာ အဆင့်နောက်ဆုံးရတဲ့ သူပုန်ကျောင်းသားတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ တက္ကသိုလ်ပညာရေးအပြီးမှာ သူ့ရဲ့ စူးရှထက်မြက်တဲ့ ဦးနှောက်ကို ရှေးရိုးစွဲ ပညာရေး အကယ်ဒမီတစ်ခုက အသိအမှတ်မပြုပဲ ပရော်ဖက်ဆာ ရာထူး မပေးခဲ့ပါဘူး။ ငွေပြတ်ပြီး